UKUQONDA I-3 YAKHO ENKULU: YINTONI ILANGA LAM, INYANGA, KUNYE NOKUNYUKA? - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI KWENYANGA - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Ukuqonda i-3 yakho enkulu: Yintoni iLanga lam, iNyanga, kunye nokunyuka?
Ukufumana itshathi yakho yokuzalwa epheleleyo kuya kufuneka wazi ixesha owazalwa ngalo, umhla owazalwa ngawo, kunye nendawo owazalwa kuyo.
Ukuvumisa ngeenkwenkweziNge-12 ka-Okthobha, ngo-2021
Isibali seTshati yokuzalwa-Fumana iLanga lakho, iNyanga kunye nokunyuka
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kungaphezulu kwemihla ngemihla ethembisa ukuba ubudlelwane bakho obuzayo bulungile kufutshane nekona, kukufunda ngokwakho kwaye xa kwenziwe ngokuchanekileyo kunokuveza ulwazi malunga nobuntu bakho ongazange ucinge ngaphambili. Ngokuvumisa ngeenkwenkwezi, i-Big 3 yakho ibandakanya iLanga lakho, iNyanga kunye nokunyuka. Nganye kwezi ndawo, kunye nezinye iiplanethi ezingaphakathi kwitshathi yakho, zilawula inkalo ethile yobuntu bakho kunye nobomi bakho.
Uya kufuna izinto ezintathu ukufunda itshathi yakho yokuzalwa kwaye ufumane iBig 3 yakho: ixesha lakho lokuzalwa, indawo yakho yokuzalwa, kunye nosuku lwakho lokuzalwa. Emva kokuba ufumene olo lwazi unako sebenzisa esi sixhobo ukusuka abahlobo bethu kwi-Astro-Charts ukufumana itshati yakho yokuzalwa yasimahla:
I-AFFILIATE DISCLOSO: iwijethi enikezelwe ngasentla kweSIXHOBO SAMAHHALA. Ukuba ukhetha ukuthenga ingxelo ehlawulweyo nge-Astro-Charts.com; Ndingafumana ikhomishini yomanyano. Intlawulo ayifunyanwa ngathi. Nceda uqhagamshelane: admin@astro-charts.com ngemibuzo.
Ukuqonda Iimpawu zakho ezinkulu ze-3 Star
Nje ukuba ube nekopi yetshathi yakho yokuzalwa, fumana iLanga lakho, iNyanga, kunye neempawu zokunyuka kwaye ufumanise ukuba loluphi uphawu lwezodiac abawela kulo. Uya kuba neendawo ezintathu ezahlukeneyo kunye nophawu oluhambelanayo ngalunye. Okulandelayo, uya kufuna ukwazi ukuba indawo nganye kwezi ndawo iziphatha njani kwitshathi yakho.
wavuka tattoos amadoda
Uphawu lwakho lweLanga neNyanga lwenza i-yin kunye ne-yang zitsale phakathi kwakho kwangaphakathi kunye nangaphandle. Umqondiso wakho weLanga ukhupha amandla obudoda kwaye ugxininise kwindlela ozivakalisa ngayo kunye namandla akho e-ego, ngelixa iSibonakaliso sakho seNyanga siphethe amandla amabhinqa alawula iingcamango zakho zangaphakathi, amaphupha, ithemba kunye neemvakalelo. Ngokudibeneyo benza abantu bakho bangaphandle nabangaphakathi - ubuso obubonisa umhlaba ngokuchasene nokuba ungubani ngaphakathi. I-Ascendant yakho ingabonisa okuninzi malunga nombono wokuqala owenzayo kwabanye. Indlela ozibonakalisa ngayo kwihlabathi luphawu lwakho olukhulayo emsebenzini. Sisekela indlela esizibonakalisa ngayo kwindlela esilibona ngayo ihlabathi. Ukunyuka kwakho sisiqwenga sesithathu sephazili xa kufikwa ekuqondeni itshathi yakho.
Uphawu lwakho lweLanga
Umqondiso wakho weLanga yinxalenye yobuntu bakho obuchitha ixesha elininzi kwindawo ebonakalayo. Ngelixa itshathi yakho yenziwe ngeendawo ezahlukeneyo zokubeka uphawu lwakho lweLanga lubonisa into efunwa yintliziyo yakho kobu bomi. Uphawu lwakho lweLanga lukwachaza indlela othanda ukuzibonakalisa ngayo kunye nendlela othanda ngayo ukutshaja kwakhona. Isizathu sokuba abantu abaninzi bazive benqanyuliwe kwiSibonakaliso sabo seLanga kukuba ngelixa iSibonakaliso seLanga sibonisa oko intliziyo yethu ifuna - akusoloko kubonakaliswa kwi-destiny yethu ebomini.
Ilanga kwi-Aries : umkhulu kunobuntu bobomi obunobuchule bobunkokeli kunye nentwana yokukhawuleza
Ilanga kwiTaurus : ungumntu onovelwano, ogadiweyo othanda ukuthatha izinto kade kunye nezinto ezintle ebomini
Ilanga kwiGemini : ungumntu ozelwe ngokwendalo onxibelelana naye onezinto ezininzi ezinomdla kunye nezalathiso ofuna ukuya kuzo ebomini
Ilanga kuMhlaza: ukrelekrele ngokwasemoyeni kunye nomphefumlo othambileyo kunye nobunzima obumangalisayo
Ilanga eLeo : ungumntu ozithembileyo kwaye onomdla onomtsalane ngokwendalo
Ilanga kwiVirgo : ungumntu othanda ukugqibelela okhuthazwayo ekufumaneni iindawo ezisebenzayo kwizakhono zakho, iitalente kunye nobuchule bakho.
Ilanga eLibra : ulibhabhathane lentlalontle elikhetha ukudlala umenzi woxolo, nangona unokuba nzima ngokulinganisela
Ilanga kwiScorpio: ungumntu onomdla kwaye ozimiseleyo oyaziyo indlela yokuphembelela abanye abakungqongileyo
Ilanga kwiSagittarius: ungumntu onamandla kwaye onomtsalane onengxaki yokuhlala kwindawo enye ixesha elide
Ilanga eCapricorn: ungumntu onamabhongo ongenangxaki yokukhokela kuyo nayiphi na inkalo yobomi
Ilanga kwi-Aquarius: ungumntu onengqondo kodwa ongaqhelekanga onentshukumisa enamandla yokuphucula okuhle
Ilanga kwiiPisces: ungumntu ongaqhelekanga onemvakalelo enzulu yovelwano kunye nentelekelelo enkulu
Uphawu lwakho lweNyanga
Umqondiso wakho weNyanga umele ubuyena bangaphakathi kunye neemvakalelo . Ngokuqhelekileyo kubhekiselwa kuyo njengobuntu bakho obufihliweyo. Ichaphazela kakhulu ubudlelwane bakho phakathi kwabantu, kunye nendlela obona ngayo ihlabathi elikungqongileyo. Kwaye njengecala elimnyama lenyanga yokwenyani, uphawu lwakho lwenyanga luyinxalenye yobuntu bakho obuhlala bufihliwe kwabanye.
Inyanga kwi-Aries: unecala lokungxama elikhokelela ukuba utsibe kwiimeko phambi kokuba ulinganise iinketho zakho
Inyanga kwiTaurus: unobuntu obuthambileyo, obuphantsi-to-eardini kodwa unobunzima bokugadwa kakhulu
Inyanga kwiGemini : uthandeka ngokungapheliyo kwaye unomdla, kodwa uthambekele ekufundiseni nasekucaciseni iimvakalelo
Inyanga kuMhlaza : udla ngokuba nenqanaba eliphezulu lovakalelo lweemvakalelo, ukuqonda, kunye ne-intuition kunabanye
Inyanga kuLeo : uyathanda ukumosha abanye kwaye unqwenela ubudlelwane apho uziva ubhiyozelwa kwaye unconywa ngokulinganayo
Inyanga kwiVirgo : uziva ukhuselekile ngokweemvakalelo kwaye uthandwa xa uziva ufunwa ngabanye abantu
Inyanga eLibra : unamandla awodwa okubona nayiphi na imeko ngokwembono yomnye umntu
Inyanga kwiScorpio : unesakhono sengqondo sokuthatha umxholo weemvakalelo kwiisetingi zeqela okanye utshintsho lwemood
Inyanga kwiSagittarius : utsaleleka kubantu abanokukubonisa ubomi ngendlela ongazange wabubona ngayo ngaphambili
Inyanga eCapricorn : Ubeka phambili ukhuseleko ngaphezu kwayo yonke enye into kubudlelwane kwaye wenze konke okusemandleni akho ukubonelela abanye
Inyanga kwi-Aquarius : unokuqonda ngokucacileyo oko ukuxabisa kuwe, iqabane, nakwabanye abantu
Inyanga kwiPisces : ungumntu onobuchule bokuphupha ngeentsuku ezimbalwa zothando othanda izinto zesiqhelo
Uphawu lwakho lokunyuka
Umqondiso wakho wokuNyuka, owaziwa ngokuba ngumqondiso wakho wokunyuka, ubonisa indlela abanye abantu abakubona ngayo nabakubona ngayo . Uphawu lwakho olunyukayo lumisela amandla omabini ubuntu bethu bangaphandle kunye netshathi yethu yokuzalwa xa iyonke. Kungenxa yokuba uphawu lwakho olukhulayo lubekwe kwindlu yokuqala yokuzazisa kunye nobuntu. Umntu onyukayo unokubonisa umahluko phakathi kwendlela osabela ngayo kwizinto zovakalelo esidlangalaleni vs ngasese. Abalawuli beTshati nabo basekwe kuphawu lwakho lokunyuka kwaye inokusinceda siqonde ngcono ukuba indawo nganye yokuvumisa ngeenkwenkwezi isebenza njani enye kwenye.
I-Aries Rising: uyakuthanda ukuba ligorha lebali lakho kwaye awusoyiki ukuthatha umngeni
Ukunyuka kweTaurus: unoxolo ngokubanzi, isimo sengqondo echwayitileyo kwaye ukhetha ukujonga phambi kokuba uthethe
Ukunyuka kweGemini: unesiphiwo somdla kwaye unokuthetha phantse nabani na kuyo nayiphi na ingcamango ukuba unikwe ixesha elaneleyo
Ukunyuka koMhlaza: ungumlamli wendalo kwaye uyakwazi ukufunda amandla kunye neenjongo zabanye ngephanyazo
Ukunyuka kukaLeo: unovelwano kakhulu kwaye uyile kodwa ubuthathaka kwaye uwazi kakhulu umfanekiso wakho
Ukunyuka kweVirgo: ulungelelanisiwe, udibene, kwaye uthembekile - uhlobo lomhlobo abantu abanokuhlala bethembele kulo
Ukunyuka kweLibra: unolwazi lwentlalo kwaye uyayazi indlela yokusebenzisa ingqondo yakho, umtsalane, kunye namagama ukuya phambili ebomini
Ukunyuka kweScorpio: Uyimfihlakalo kwaye ulawulwa, kodwa ngokumangalisayo ucacile malunga neemvakalelo zakho xa uyekile ukulinda
Ukunyuka kweSagittarius: uyakuthanda ukuzonwabisa kwaye unomdla- kwaye awoyiki ukuphinda uzenzele kwaye uqale ngokutsha
Ukunyuka kweCapricorn: ungabaphumeleleyo abangoyikiyo abavelisa ubuchule kumzamo wanaphakade wobukhulu
Ukunyuka kwe-Aquarius: ungumvukeli kunye nomthandi wenkululeko wokugqibela onotyekelo lokungazicingeli
Ukunyuka kweePisces: Ungungqondongqondo weemvakalelo ochumayo kwiimeko ezifuna ubuqili kunye ne-nuance
Ungayifumana njani i-6 yakho enkulu kwi-Astrology
Kulungile, ke siyigubungele iBig 3 yakho; kodwa zithini kanye kanye iimpawu zakho ezinkulu ezi-6 zokuvumisa ngeenkwenkwezi? Ngokuvumisa ngeenkwenkwezi, iBig 6 yakho ibandakanya iLanga, iNyanga, iAscendant, iMercury, iVenus, kunye neMars. Ezi planethi kunye nezikhanyiso, kunye nezinye iiplanethi zakho, zonke zinokufumaneka kwitshathi yakho yokuzalwa. Isebenza njengolwandiso lweBig 3 yakho, ukubekwa kwakho kweBig 6 ngeenkwenkwezi kunika ujongo olubanzi kubuntu bakho xa bubonke.
Ngokubandakanywa kweMercury, Venus, kunye neMars kumxube, iBig 6 yakho inokukubonisa indlela othanda ukunxibelelana ngayo, ukonwabela ukuthandwa, indlela ophatha ngayo impixano, nokunye. Wakuba unetshathi yakho, jonga iimpawu zakho zeBig 6 zokuvumisa ngeenkwenkwezi (iLanga, iNyanga, i-Ascendant, iMercury, iVenus, neMars.) Uya kuba neendawo ezintandathu ezahlukeneyo zokubeka kunye nophawu lwezodiac oluhambelanayo ngalunye. Iya kujongeka ngolu hlobo:
Nje ukuba ube neendawo kunye neempawu ezihambelanayo zeBig 6 yakho, lixesha lokumba nzulu. Jonga isikhokelo sethu esitsha kwiimpawu zezodiac ezihambelanayo.
iinwele ezinde isimbo samadoda
ukubala uphawu olunyukayo
1 intshi ye-buzz cut